sawehlor: Naka Virus နှင့် aungsansukyi@blumail.org
အရေးကြီးတဲ့ စာလေးမို့ သေချာဖတ်ပြီး share လုပ်ပေးသွားစေချင်ပါတယ်
ဗိုင်းရပ်နာမည်ကတော့ Naka တဲ့ဗျာ ။
File URL: http://goo.gl/A9sHt
[file is deleted - due to Suspend Hosting- Thank you Mike from GoDady who taking care this :)]
(ပထမဆုံးပေါ့ မြန်မာပြည်မှာ ဒီဗိုင်းရပ်မရှိသေးပါဘူး သင်ကဒီ worm ကို Naka လို့ နာမည်ပေချင်ရင် ကျွန်တော်တို့ကတော့ BSGH လို့ နာမည်ပေးရလိမ့်မယ် အပြည့်အစုံကတော့ “"Bangalishit Script-kiddie Got Hacked" ပေါ့ ။
(သူတို့က မြန်မာကလူတွေဟာ သူတို့ကောင်တွေလို ကွန်ပြူတာ PC အစုတ်လေးတွေ သုံးနေတယ်ထင်နေကြတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ MAC နဲ့ Linuxတွေသုံးနေကြတယ် ။ ကဲ သင့်မှာ ကျွမ်းကျင်တာများရှိရင် Linus အတွက် ဗိုင်းရပ်တစ်ကောင်လောက်ရေးကြည့်ပါဦး ငါတို့မှာ သူတို့နဲ့ မတူညီတဲ့စွမ်းရည်တွေရှိကြပါတယ် ။ )
ဒီ worm က ဖေ့ဘုတ် နဲ့ ဂူဂဲလ် အိုင်ပီလိပ်စာတွေကို ပြုပြင်ဖန်တီးပြီး သူတို့ ၀ဘ်ဆိုက်ထဲ အိုင်ပီလိပ်စာတွေရအောင်လုပ်ကြတယ် ။ အကယ်၍ တစ်ယောက်ယောက်ကများ ဒီပိုးဝင်နေတဲ့ ကွန်ပြူတာသုံးပြီး ဖေ့ဘုတ် ၀င်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူ့ဖေ့ဘုတ်အကောင့်တော့ အဟတ်ခံရပြီ ။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင်တွေက မြန်မာက လူတွေ အင်တာနက်ဘယ်လို သုံးတယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး ။ မြန်မာပြည်က လူတိုင်းက အစိုးရက ပိတ်ထားတဲ့ ကြီးမားတဲ့ Firewall ကြီးတွေတောင် ဘယ်လို Bypass လုပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်ကြတယ် ။ ဥပမာ Anonymous IP သုံးတာမျိုးပေါ့ :P
<=== To replace with Facebook
<=== To replace with Google
ကဲ သင့်ရဲ့ ဖိုင်တွေမှာ ဒါတွေတွေ့ရင်တော့ အထက်မှာပြထားတဲ့ နှစ်လိုင်းနဲ့ သတ်ပစ်လိုက်ဗျာ ။
မက်ဆေ့အတုတွေပို့တာပေါ့ စာသားကတော့ ပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ်လိုက်မယ် ဖွင့်လိုက်တဲ့ ပရိုဂရမ်က Compatible မဖြစ်ဘူးဘာသာပေါ့ ဒါကြောင့်ဒါကို run ပါပေါ့ မက်ဆေ့အတုတွေ သတိထားပေတော့ ။
ဒီအီးမေးလ်လိပ်စာနဲ့ ပါ့စပ်က ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ အခုတော့ကျွန်တော်တို့ အဲဒီအကောင့်ကို hack ပြီး ဖျက်လိုက်ပါပြီ ဒီအကောင့်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာပြည်က PC တွေကို လိုက်ပြီး log လုပ်ဖို့ပါပဲ ။ ကျွန်တော်တို့ ဂူဂဲလ်ကိုလည်း ဒီအကောင့်ကို recovery လုပ်ရင်လက်မခံဖို့နဲ့ proof မပေးဖို့အကြောင်းကြားပြီးပါပြီ ။
<== After I saw one activity to recover the password, really your confirmation code in my phone. LOL! So I am ready to do this.
<=== Ouch! That may hurt to BD guys!
ဒီအကောင်မှာ အန်တီဗိုင်းရပ်တွေ detect မလုပ်နိုင်အောင် လုပ်ထားတဲ့အစွမ်းရှိတယ် ဒါကြောင့် Avast, AVG, BitDefender, ClamAV, F-Secure, G-Data, Kaspersky, Panda, Quick Heal, VBA32, VirusBuster စတာတွေနဲ့စစ်လို့မရဘူး ။
မစိုးရိမ်ပါနဲ့ Generic.dx ဆိုတဲ့ worm ကို AntiVir, CPSecure, Dr.Web, Emsisoft, ESET, F-PORT, IKARUS, SOPHAS စတာတွေက detect လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။
exe file တွေကို ပိုးဝင်နေတဲ့စနစ်ထဲမှာ သင်ရှာနိုင်တယ် ။ You can find exe files (NakaNaka.exe, Naka.exe) in infected system.
ဒါကြောင့် သင်ဒီဖိုင်ကို တစ်ကြိမ်လောက် run လိုက်ရင် သင့်ကွန်ပြူတာကို ပိုးဝင်ပြီး သင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေမှန်သမျှ သူတို့ ဟက်ကာတွေ အီးမေးလ်လိပ်စာကိုပို့ပေးလိမ့်မယ် ။ ပြီးတော့ Task Manager , cmd.exe , run box တွေကို အကုန် disable လုပ်လိုက်လိမ့်မယ် ။ ပြီးတော့ တချို့ task တွေကို သတ်ပစ်လ်ိမ့်မယ် ဥပမာ "SC stop wscsvc", "SC stop SharedAccess"
For Task Manager Problem please visit at http://support.microsoft.com/kb/555480
worm က သူတို့ ဖိုင်တွေကို hidden လုပ်ပေးထားတယ် ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ worm ကregister key ကို နံပတ် ၁ အဖြစ်ပြောင်းလိုက်တယ် ။
LOL, i don't know why this URL is used for http://automation.whatismyip.com/
, that URL is already block for long time ago from whatismyip.com.
Worm က ရဟူး လိုက်ဖ်နဲ့ စကိုက်တွေကိုပါ မက်ဆေ့အတုနဲ့ဖိုင်တွေပို့ပေးနိုင်တယ်
ဒါကြောင့်အောက်မှာ ပြထားတဲ့ဖိုင်တွေကို ပါ ရှင်းပစ်ဖို့လိုတယ်
ကဲ registery ကိုလည်း check လုပ်ကြည့်ကြပါဦး
သင့်အကောင့်ပါ့စ၀ပ်က ပြောင်းသွားတယ်လို့မြင်ရင် Universalsashere ကို ပါ့စ၀ပ်နေရာရိုက်ထည့်ပါ ။ သင့်ရဲ့ system ထဲမှာ အဲဒီနာမည်နဲ့အကောင့်သစ်ရောက်နေခဲ့ရင် pass ရော username ရော အတူတူပါပဲ ။ ဖယ်ထုတ်ပြီး change ပါ ။
မှတ်ချက် -- အထက်ပါပို့စ်ကို ကျွန်တော်ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး ။ ကိုလင်းထက်ရေးတာဖြစ်ပြီး မြန်မာလို ဘာသာပြန်တာကတော့ ကျွန်တော့်ဘာသာ ဆီလျှော်သလို ပြန်ပေးထားတာပါ အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြီးလည်း ဒီworm တွေကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ် ။
Source : သက်တန့်ချို
Posted by saw ehlor at 03:54